Uyakwazi ukwenza iimilo zetyhubhu ezingekho mgangathweni?
Ngokwenyani, le yinkalo ethile yobungcali. Ngokusebenzisa ubuchule bobunini sinokwenza iityhubhu edibeneyo kunye nokugoba, kunye ne-tapered tubing. Ukuba unemfuno entsonkothileyo, sifuna ukuva kuwe ke nceda uqhagamshelane ukuze ufunde ngakumbi malunga nokuba sinokunceda njani kwiprojekthi yakho.
Ngaba ungayenza iityhubhu ze-carbon fiber?
Sinamava amaninzi kunye nobuchule kule ndawo, sele sisenza iityhubhu zetelescopic composite iminyaka engaphezu kwe-10. Unokufunda ngakumbi malunga nezicelo zetyhubhu ye-telescopic apha okanye uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya
Ngaba unokufaka imathiriyeli yobungcali kwinkqubo yokwenziwa kwezinto?
Senza iityhubhu edibeneyo kunye namalungu ukuhlangabezana nemigaqo yomthengi ngokuthe ngqo, ngoko ke sinokubandakanya izixhobo ezikhethekileyo ukuba isicelo sifuna njalo. Imizekelo yoku ngaphambili ibandakanye izinto zokunqanda umlilo kunye nezixhobo zokubetha umbane. Funda ngakumbi malunga neenkqubo zethu zokuvelisa.
Uyibophelela njani i-carbon fiber?
I-CFT ziingcali zokudityaniswa kwamacandelo, zombini i-composite-composite kunye ne-composite-non-composite. Amava ethu anike ingxelo ebalulekileyo kunye neziphumo zovavanyo olusebenzayo ukwazisa kunye nokuqinisekisa uyilo lwethu oludibeneyo. Sigcina uluhlu lwee-adhesives ezibandakanya i-epoxies yesakhiwo, i-methyl acarates kunye ne-cyanoacrylates kwaye inokunceda ekukhetheni i-adhesive, i-factoring kwii-substrates ezahlukeneyo kunye neendawo zokusebenza. Ukuze ufunde ngakumbi malunga nomatshini, ukudibanisa kunye nokudibanisa, okanye uqhagamshelane nathi ukuxoxa ngeemfuno zakho.
Bubuphi ubungakanani betyhubhu ye-carbon fiber onokuthi uvelise?
Singumvelisi oxhasa inkonzo yesiko. Singenza ngokubanzi ubungakanani obufunayo.
Ngaba uyinkampani yokurhweba yefektri?
Singabavelisi abanamava angaphezu kwama-20 eminyaka ekwenzeni iityhubhu, uya kufumana iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo.
Liliphi ixesha elikhokelayo leodolo eqhelekileyo?
Iintsuku eziyi-14-21 zobungakanani bomyalelo ongaphantsi kwe-6000pcs; Ngobuninzi obungaphezulu, ngokuqhelekileyo iintsuku ezingama-30.
Ewe, kwi-odolo yobuninzi ngaphezu kwe-500 pcs, nceda uqhagamshelane nathi ukuze ufumane elona xabiso lihle.
Ngaba uyazihlola iimveliso ezigqityiweyo?
Ewe, inyathelo ngalinye lemveliso kunye neemveliso ezigqityiweyo ziya kuphuma zihlolwe lisebe le-QC ngaphambi kokuthunyelwa.
I-Carbon Fiber Rod, I-Carbon Fiber Cue Shaft, ICarbon Fiber Square Tube, Icwecwe leCarbon, ICarbon Fiber Telescopic Tube, Umbhobho weCarbon Fiber,